Aqalka Cad: Xiisadda Khaliijka waa “mid qoys” | Baydhabo Online
Aqalka Cad: Xiisadda Khaliijka waa “mid qoys”
Dowladda Maraykanka ayaa ku tilmaamtay xiisadda sii socota ee u dhexeysa dalka Qadar iyo waddamo kale oo Carab ah, in ay tahay mid salka ku haysa “arimo qoys”.
“Waxaan rumaysannahay in khilaafkan uu u dhexeeyo qoys, afarta dal ee is-hayana waxaa looga baahan yahay in ay gaaraan xal dhexdooda ah,” ayuu yiri Spicer oo intaa raaciyay, “haddii ay gacan nooga baahan yihiin diyaar ayaan u nahay, balse waa in ay xalka gaaraan.”
Qadar ayaa waxaa go’doomiyay xulafo uu horkacayo Sacuudiga, waxaana loo soo bandhigay 13 dalab oo ay tahay in ay fuliso xukuumadda Dooxa, si looga qaado cunaqabateynta.
Waxaa shuruudahaasi ka mid ah in Qadar ay xirto warbaahinta Al Jazeera, ayna xiriirka u jarto Iran.
Dalalka uu u dhexeeyo khilaafkan ayaa dhammaantood xiriir dhaw la leh Maraykanka, xoghayaha arimaha dibedda ee dalkaasina weli kama uusan hadlin shuruudaha lagu xiray Qadar.